Manondrana Ny Korontana Sy Fampielezankevitra Ho Any Amin’ny Balkan Ny Governemanta Hongroà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2018 13:01 GMT
Fihetsehana manohitra ny lalàna mikendry ny fanakatonana ny Oniversitean'ny Eoropa Afovoany sy ho an'ny fiarahamonina sivily ny 12 Aprily 2017 tao Budapest, Hongria. Sary : Fondations Open Society, CC BY-NC-
Fanadihadiana nataon'ny Nova TV, fampahalalambaovao tsy miankina makedoniana, no nanambara fa ireo orinasa miray tsikombakomba amin'ny Hongria no nandray anjara tamin'ny famantsiambola ny fampahalalambaovao sasany izay mandefa fampielezankevitra fambaboana olona nataon'ny farany havanana ao Makedonia nandritra ny fepotoana naha-teo amin'ny fahefana ny vondrona mpomba an'i Rosia VMRO-DPMNE (2006-2017)
Tao anaty lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Orban mihetsika ho famonjena ny megaphone an'i Gruevski”, namboraka ireo fifandraisan'ny tahirimbola sy ny fananana eo amin'ny ireo fitaovana goavana fanaovana fampielezankevitry ny havanana, toy ny Kurir.mk, Republika.mk sy Alfa TV, ny lehiben'ny toniandahatsoratra ao amin'ny Nova TV Borjan Jovanovski, miaraka amin'i Árpád Habony, lehiben'ny mpitondratenin'ny praiminisitra hongroà, Viktor Orbán, izay nomena ny solonanarana “Steve Bannon an'i Hongria”
Tamin'ny farany teo, nametraka petadrindrina hanaovana dokambarotra ho an'ilay tranonkala anà orinasa slovena, Ripost Založništvo d.o.o. ireo fampahalalambaovao ireo. Ny sasany amin'ireo dokambarotra ireo dia mitondra mankamin'ny RipostMk.com, fitaovana fampahalalambaovao maizimaizina amin'ny teny makedoaniàna manana toniandrahatsoratra sy mpiasa tsy fantatra anarana. An'ny Ripost izy ireo, miaraka amin'ny mpandrindra sehatra manana adiresy imalilaka an'ny orinasa fakankevitra hongroà netlight.hu.
Pikatsarin'ny pejy fandraisan'ny Kurir.mk miaraka amin'ny dokambarotra roa ho an'ny tranonkalan'ny Ripost, ary lahatsoratra amin'ny pejy voalohany mampifandray an'ny praiminisitra makedoniana Zaev amin'ny Gresy ao anatin'ny resaka momba ny fiantsoana.
Miaraka amin'ny fanampian'ireo Slovena mpiaramiasa, azon'ireo mpanao gazet7 makedoniàna ireo rakikevitra avy ao amin'ny tahirinkevitra foibe slovena izay manondro fa olompirenena hongroà iray no tompon'ny Ripost, Péter Schatz. Tamin'ny Jolay 2018, lasa tompony faharoa ao amin'ny Alfa TV ao Makedonia i Schatz, raha any Slovenia kosa mbola miasa tahaky ny solotenan'ny vondrona hongroa iray izy, izay ao anatiny ny Modern Media, novatsin'ny governemanta hongroa ara-bola amin'ny alàlan'ireo fampielezankevitra “ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka”. Nahazo ampahany be tamin'ilay 40 tapitrisa euros nolanian'ny governemanta hongroà ho an'ny fampielezankeviny manohitra an'i Soros tamin'ny 2017 ny Modern Media. (Teny kelin'ny mpanoratra: Mahazo famantsiambola avy amin'ny Fondations Open Society an'ny réseau Soros, ny Global Voices)
“Nila fahavalo iray foromporonina tsy afaka ny hamaly azy i Orban ka ireo vondron'ny Fondations Open Society no niniana nomena laza ratsy” hoy ny lehiben'ny toniandahatsoratry ny Atlatszo Tamas Bodoky.
Karazanà tranonkala tao inona no notohanan'ny renivola hongroà?
Tamin'ny taona faramparany teo, ireo rantsana fampahalalambaovao makedoniana nahazo dokambarotra sy fananana hongroà no nisy fifandraisana tamin'ny resabe momban'ny fanjavozavoana matetiky ny fananany, ary ireo mpanoratra ao aminy sy ireo loharanon'ny famatsiambolany, hatramin'ny tsy fisian'ny firotsahany hanaraka ny lalàn'ny mpanao gazety.
Noho izany, noraisina ho toy ny feon'ny Foiben'ny fifandraisan'ny antoko fahiny teo amin'ny fahefana, VMRO-DPMNE ny Kurir.mk . Tsy misy sonia ny ankamaroan'ny lahatsorany, ary angamba nosoratan'ireo apparatchiks-n'ny antoko.
Nandritra ny taona voalohany nisiany, ny mpandoa hetra no tena namatsy ny Kurik.mk, tamin'ny alàlan'ireo fifanarahana fitantanana ho an'ny “asa momba ny haino aman-jery” tahaky ny fandefasana hetsika mivantana ho an'ny andrimpanjakana. Fifanarahana izay zara raha mahatratra ny 5.000 euros amin'ny fanomezana tsena amin'ny alàlan'ireo tolobarotra ampahibemaso. Manome tohana fanampiny ho an'ireo olom-panjakana sy orinasam-panjakana amin'ny fividianana petadrindrina ho an'ny dokambarotra.
Raha araka ny vondrona mpanao fanadihadiana Mediapedia, orinasa any afovoan-dranomasina voarakitra ao Belize, izay tsy fantatra tompony, no tompony nanao an'ilay tranonkala fampahalalambaovao Republika.mk. Afaka hita fa fananany ilay izy satria voarakitra amin'ny toerana hisian'ny orinasa hafa mifandray amin'ny manampahefana makedoniana sy naman'ny mpitondra ilay orinasa tampimaso. Mavitrika manafika ady an'ireo mpikatroka sy mpanao gazety tsy miankina amin'ny famoahana lahatsoratra tsy marina ilay tranonkala. Nohamarinin'ny Fitantanana ny Fiarovana iore Lahatahiry Manokana fa nampiasa rakitra manokana azon'ny andrimpanjakana tamin'ny fomba tsy manara-dalàna ny Republika.mk, ary nitondra ny resaka teny amin'ny fitsarana ny sasan'ny amin'ireo olona voany tamin'ny 2016. Mbola tsy nivoaka ireo didimpitsarana.
Tamin'ny 2008, mpandraharaha iray nifandray tamin'ny mpanohitra tamin'izany fotoana izany no namorona ny Alfa TV, ho toy ny fahitalavitra an-drenivohitra, ary nitombo laza ho mpanome vaovao matihanina, mandrakotra ny ara-kolontsaina ary mandahatra horonantsary tsara. Taorian'ny fividianana feno fankahalàna tamin'ny 2013, nisarika andianà tompony makedoniana sy vahiny (serba sy hongroà), anarana indramina fotsiny heverina ho avy ao amin'ny antoko teo amin'ny fitondrana tamin'izany ilay fahitalavitra. Lasa nitodika teny amin'ny fialamboly, izay mifototra indrindra amin'ny hira turbofolk, ny fandaharana ary, na noroahana na nasaina nametra-pialana ny mpiasa mpanao gazety tamin'ny voalohany tao.
Misy isan-jato betsaka avy amin'ny fanapahankevitry ny Filankevitry ny Fitsipipifehezan'ny Media ao Makedonia, rantsana mahaleotena mifehy ny media ary mamaritra ny fanitsakitsahana ny fitsipipifehezana amin'ny fanaovana gazety, ireo fitarainana anenjehana ireo sampandraharaha fampahalalmbaovao voatanisa tery ambony. Amin'ny fitarainana 124 itoriana sampandraharaha fampahalalambaovao miisa 42 ary nodinihana teo anelanelan'ny desambra 2014 sy oktobra 2016, 14% tamin'ny Kurik.mk, 6% tamin'ny Republika.mk, ary 2% tamin'ny Alfa TV.
Mikendry ireo fiarahamonina sivily sy fampahalalambaovao tsy miankina i Hongria.
Amin'ireo fanavaozana demokratika nampidirin'ny governemanta makedoniana amin'izao fotoana izao – ary nakatoavin'ireo rantsna ambony indrindra ao amin'ny UE - no misy ny fandraràna ny dokambarotra ataon'ny governemanta any amin'ireo fampahalalambaovao nasiônaly, fanao mahazatra teo ambanin'ny fitondran'ny ankavanana VMRO-DPMNE. Ny hatezeran'ny daholobe manohitra ny kolikoly lalim-paka any amin'ny sehatra ambony any, miaraka amin'ny hosoka ara-pifidianana, no nahatonga ny fiovan'ny governemanta tao Makedonia tamin'ny fifidianan'ny Desambra, na nahemotrin'ny VMRO-DPME efa ho tapa-taona aza ny famindrana fahefana, nitondra ny firenena hanakaiky ny ady an-trano tamin'ny aprily 2017 niaraka tamin'ny fikarakaràna fanafihana feo rà nandriaka nanjo ny parlemanta. Fa nandresy ihany ny fanohanan'ny vahoaka, ny havesatrin'ny mpanohitra tamin'izany fotoana izany ary ny zotra pôlitika noentin'ny UE, ary namarana an'ilay krizy pôlitika nohalavaina alohan'ny nahalasa azy lavitra.
Mety ho tsy nanana vintana bebe kokoa tao anatin'ny fotoana fohy ry zareo Hongroà. Nampiasa ny fahefana rehetra nananan'ny firenena sy ny vola voahangona tamin'ny finamanana mba handresena tamin'ny fifidianana tao amin'ny parlemanta tamin'ny aprily 2018 ny antoko Fidesz-n'ny praiminisitra Orban, ary nanomboka nanatenteraka ny fampanantenany ‘valifaty’ tamin'ireo rehetra nanana hevitra tsy nitovy taminy. Tahaky ny VMRO-DPMNE, izay ananany fifandraisana taloha, nofafàn'ny Fidesz ny tsipika manasaraka ny antoko sy ny Fanjakana tamin'ny fampandohalihana ireo andrimpanjakana sy ny fananam-panjakàna ho amin'ny tombontsoan'ny antoko ary nikolokolo tontolo feno tahotra amin'ny fampiasana ny fampirafesana sy ny nasionalisma ho fitaovampiadina voalohany hanaovany fampielezankevitra.
Tao Makedonia, nivadika ho fampielezankevitra manohitra ny mpitsoaponenana io tetika io, ny gazety malalaka sy ny ‘Andrefana’, ireo fikambanana avy amin'ny fiarahamonina sivily sy ilay amerikàna mpitia ny mpiara-belona aminy, manana fiaviana Hongroà, George Soros, izay nosoloina ho “Rosthschild” ny anarany mba ho famantarana ny ‘loza jiosy’ ao amin'ny tontolon'ny resaka tsy tia jiosy ary ireo hevitra miray tetika manohitra ny tandrefana.
Lasibatra voalohan'ny Fidesz tao Hongria ny Fondations Open Society (fanafohezanteny anglisy OSF) an'ny Soros sy ny Oniversiten'ny Eoropa Afovoany, fampahalalambaovao tsy miankina vitsy izay mbola misy ary akaiky tsy lavitra azy ireo ny fitsaràna, eo amin'ny sehatra faharoa sy fahatelo.
Eo ankilan'ireo fanohanana noho ny fitiavana olona mahazatra, nanomboka tamin'ny 1986, nampiasa nihoatra ny 400 tapitrisa dollara ny OSF ho amin'ny fanorenana ny demokrasia ao Hongria nandritra ary taorian'ny naharavàn'ny fitondrana kaomonista. Nilaza ny fifindran'ny biraony avy ao Budapest mankany Berlin ny OSF taty aoriana, mieritreritra mialoha ny fampiharana ireo lalàna “Atsaharo ny Soros” naroson'ireo parlemantera “maro an'isa be” indrindra avy amin'ny antoko Fidesz.
Naka tàhaka an'i Rosia tamin'ny 2012, mapetrak'ilay fepetra vaovao ny hetra mavesatra amin'ireo fikambanan'ny fiarahamonina sivily izay mahazo fanampiana ara-bola avy any ivelany, ary nataony ho ara-dalàna ireo filam-baniny hafa ikendrena izay hahataraiky ny asa andavanandron'izy ireny.
Efa nanomboka fikarakarana mba hijerena sy hanoherana ny firodanan'ny demokrasia ao Hongria, firenena mpikambana ao aminy, ny Vondrona Eoropeana. Fahiny, nakatson'ny tetika pôlitikan'ny Antokom-bahoaka eoropeanina, (ankavanana) izany hetsika izany, fa manomboka masiaka ireo antoko eoropeàna avy amin'ny afovoany-havanana momba ny ilàna ny mametra ny fahefan'ireo hery mpandàla vahoaka.